စိန်ညိုထွန်း၊ ဦး ရခိုင်သဟာယအသင်း(ရန်ကုန်) - ဝီကီပီးဒီးယား
ရခိုင်သဟာယအသင်း (ရန်ကုန်)၏ ပထမဆုံးဥက္ကဋ္ဌကြီး
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရခိုင်အမျိုးသားများ လူမှုရေးပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးတို့အတွက် ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ဆိုရှယ်ကလပ် (Arakan Social Club) ကို စတင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြပါ သည်။ ထို့နောက် ရခိုင်အမျိုးသားတို့၏လူမှုရေးကိစ္စများအပြင် အမျိုးဘာသာ သာသနာအရေးတို့ကိုပါ ပိုမိုပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့ ပုဇွန်တောင်အစိုးရတန်းမြင့်ကျောင်း ခန်းမ၌ ပြုလုပ်သည့် သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးမှ ရခိုင်ဆို ရှယ်ကလပ်ကို ရခိုင်သဟာယအသင်း (ရန်ကုန်)ဟု အမည် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါသည်။ ထိုစဉ်က ရခိုင်ဆိုရှယ် ကလပ်၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော ဦးစိန်ညိုထွန်းသည် အသစ်ပြောင်း လဲ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် ရခိုင်သဟာယအသင်း(ရန်ကုန်) တွင်လည်း အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ပထမဆုံးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆက် လက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဦးစိန်ညိုထွန်းကို ၁၉ဝ၆ ခုနှစ်တွင် စစ်တွေမြို့၌အဘ ဦးမောင်ညို(B.A)နှင့် အမိ ဒေါ်ဝင်းမြတို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ မွေးချင်းညီအစ်ကိုမောင်နှမ ၄ ဦးရှိပါသည်။ အစ်ကိုကြီးမှာ ဦးထွန်းအောင်ကျော်ဖြစ်ပြီး ညီမှာ ဦးထွန်းညို (B.A,B.L) စက်ရှင် တရားသူကြီးနှင့် ညီမမှာ ဒေါ်မြညို (ပညာမင်းကြီး ဦးသာလှ၏ဇနီး)တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဦးစိန်ညိုထွန်းသည် ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ B.A (Hons) ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွင် ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ရာ ၁၉၂၇ ခုနှစ်မှ၁၉၂၉ ခုနှစ်အထိ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပညာသင်အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် အိန္ဒိယပဋိညာဉ်စံ ဝန်ထမ်း (I.C.S) အဖြစ် ရာထူးချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ နယ်ပိုင် ဝန်ထောက်၊ ခရိုင်ဝန်၊ ဒုတိယငွေစာရင်းမင်းကြီး ရာထူးအဆင့် ဆင့်ဖြင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်သည့်အချိန်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ စစ်ပြီးခေတ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ရသည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကာလ၌ Burmese Agencies Co. Ltd တွင် Managing Director အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီ အစိုးရလက်ထက်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဦးစိန်ညိုထွန်း၏ အိမ်ထောင်ဖက်မှာ စစ်တွေမြို့မှ စက်ရှင်တရားသူကြီး ဦးသာဇံဦး ဒေါ်မဘုတို့၏ ဒုတိယသမီး ဒေါ်ကျော့သာဖြစ်ပြီး သားတစ်ဦးနှင့် သမီးတစ်ဦး ဖွားမြင်ခဲ့ပါ သည်။ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်မစိန်သာမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တစ် ကျောင်းလုံးတွင် ပထမဆုဖြင့် B.S.C. (Hons) ဘွဲ့ကိုထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ပါရဂူဘွဲ့(P h.D) အတွက် အစိုးရပညာတော် သင်အဖြစ် နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်ရန် ရွေးချယ်ခံထားရစဉ် ၁၉၅၃ခုနှစ်တွင် နာမကျန်းဖြစ်၍ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ သား ဖြစ်သူ ဦးထွန်းမောင်မှာ လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ (Aeronautical Engineer) တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ဦးစိန်ညိုထွန်းသည် ထိုခေတ်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပညာရေးလောကတွင် ဩဇာတိက္ကမရှိသည့် ပညာရှိသုခမိန် တစ်ဦးအဖြစ်လည်း လူသိများ ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့ပါသည်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပါမေက္ခများခန့် ထားရန်နှင့် နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်များစေလွှတ်ရန် စိစစ်ရွေး ချယ်ရာတို့တွင်လည်း အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပါ သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရခိုင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှ စီစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သော ဉာဏ်ကြီးရှင်များ (Brain Trust) အဖွဲ့တွင် ဒေါက်တာထင်အောင်၊ ဒေါက်တာသာလှ၊ ဒေါက်တာလှကျော်၊ ဦးသိန်း(ဇဝန)၊ ဦးသိန်းဖေမြင့်စသည့် ပညာရှင်ကြီးများနှင့် အတူပါဝင်ပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏သိလိုရာမေးခွန်း ပုစ္ဆာများကို ပင်တိုင်ဖြေဆိုခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ထို့ပြင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ စီစဉ်ပြုလုပ်သော ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အထွေထွေ ဟောပြောချက်များကိုလည်းကောင်း၊ သက်ကြီး တက္ကသိုလ်တွင် သင်္ချာဘာသာရပ်ကိုလည်းကောင်း၊အမြဲတာဝန် ယူပို့ချခဲ့သူ ပညာရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။
ဦးစိန်ထွန်းညိုသည် ဘာသာရေးစာပေနှင့် ရခိုင်သမိုင်း ယဉ်ကျေးမှုတို့ကိုလည်း အထူးအလေးထား လေ့လာလိုက်စားခဲ့ သူ စာပေပညာရှင်၊ သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ရခိုင်သမိုင်း ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစာတမ်းနှင့် ဆောင်းပါးများစွာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာတြို့ဖင့် ရေးသားပြုစုခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့အသံ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အစီ အစဉ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်ဆိုင်ရာဟောပြောချက်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အသံလွှင့်ဟောပြောခဲ့ပါသည်။
ဦးစိန်ညိုထွန်း ရေးသားပြုစုခဲ့သော လူသိများ ပြောင် မြောက်ထင်ရှားသည့် ဆောင်းပါးများ၊ စာတမ်းများမှာ- 1.The Six High Powers (အဘိညာဉ်ဆောင်းပါး)
2.Review of the most ancient Rakhaing History.
3.The History of Rakhapura as foretold by Gautama Buddha.
4.Name of Country.
5.Did the Gvilization to the Rakhaing Kingdom come from India?
6.Lan guage in the Rakhaing Kingdom.
7.Eras that had been in use in the Rakhaing Kingdom.
8.The Period of the Buddhas.
စသည်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဦးစိန်ထွန်းညိုသည် အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ် ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ကွယ် လွန်ခဲ့ပါသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ရခိုင်သဟာယအသင်း (ရန်ကုန်)၏ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အပြင် ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းဓညဝတီ သာသနာပြု ကျောင်းတိုက်ကြီး၏ ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် လည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စိန်ညိုထွန်း၊_ဦး_ရခိုင်သဟာယအသင်း(ရန်ကုန်)&oldid=415901" မှ ရယူရန်